शंकाको घेरामा 'विशेष सम्बन्ध' | Bipin Adhikari
शंकाको घेरामा ‘विशेष सम्बन्ध’
नाथन हेल अमेरिकी इतिहासका ‘हिरो’ मानिन्छन् । उनी सिपाही थिए र अमेरिकी क्रान्तिका बेला जासुसका रूपमा काम गर्थे । तत्कालीन महाद्विपीय सेनाका लागि कार्यरत उनी बेलायत अधीनस्थ न्युयोर्क राज्यमा गोप्य जानकारी खोज्ने कार्यमा संलग्न भएका बेला समातिइए । उनलाई फाँसी दिइयो ।
नाथन हेललाई फाँसीमा झुन्ड्याउनुअघि कसैले गरेको प्रश्नको प्रत्युत्तरमा दिएको उनको अमर वाक्यले अमेरिकी राष्ट्रवादलाई आज पनि प्रेरित गरिरहेको छ । त्यो हो, ‘मलाई केवल अपसोच छ कि मेरो मुलुकका लागि दिनसक्ने मसँग एउटा ज्यानमात्र छ ।’ अर्थात् मारिनुपरेकोमा पीडा छैन । यदि उनीसँग भनेजति ज्यान हुँदो हो भने त्यो पनि उनले आफ्नै मुलुकका लागि दिन्थे । २१ वर्ष उमेर पुरा नगरेको यो ठिटोको भनाइ कसैका लागि पनि प्रेरणादायी हुनसक्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा जान पटुका कस्दै हुनुहुन्छ । राष्ट्रवादका बारेमा उहाँको विविध टिप्पणी सार्वजनिक भइसकेका छन् । राम्रो कुरा हो । तर मूल प्रश्न भनेको के प्रधानमन्त्री भारत जानु जरुरी छ भन्ने नै हो । के यो भ्रमण भारत पीडित नेपालीका लागि सम्मानजनक छ ? यो प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिन सक्नुभएको छैन । सारा नेपालीले जान्दछन्, नयाँ संविधान घोषणा गरेकोमा निहुँ खोजेको भारतले हो । नाकाबन्दी पनि उसैले लगाएको हो । थिचोमिचो पनि उसैले गर्दै आएको छ । सम्बन्ध सुधार्ने जिम्मेवारी पनि उसको हो । यसका लागि भारतका प्रधानमन्त्री नेपाल आउनुपर्ने हो । उसो भए के प्रधानमन्त्री ओली चेपुवामा परी भारत जाँदै हुनुहुन्छ ? उहाँलाई भारत जानुपर्ने के बाध्यता छ ? नेपालीले नाकाबन्दीका कारण खपेको दु:ख–कष्ट र हीनतालाई प्रधानमन्त्रीले बिर्सिसक्नुभयो ?
नेपालमा भारतको प्रधानमन्त्री, सरकार वा भारतीय क्षमताका बारेमा धेरै भ्रमहरू छन् । विशेषगरी त्यहाँको सरकारले लिएको नीतिका कारण कतिपयलाई भारत बाघ, भालु वा चितुवा नै लाग्छ । कतिपयलाई अरिंगालजस्तै लाग्छ । तर भारत सरकार प्रजातान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित भएको सरकार हो । जसरी नेपालका नेताहरू नेपाली प्रजातन्त्रका उपज हुन्, भारतका नेताहरू पनि भारतीय प्रजातन्त्रको उपज हुन् । भारतमा संविधान छ । कानुन छ । कानुनको शासन पनि छ । स्वतन्त्र अड्डा, अदालतहरू पनि छन् । भारत दुस्साहसी हुनसक्छ्, तर बाघ, भालु, चितुवा हुनसक्दैन । अरिंगाल हुनसक्दैन ।
भारत कुनै आवधिक सरकारको विर्ता होइन । सबैले जनताको मुख हेरेर शासन गर्नुपर्छ । त्यस्तो सरकार भारतीय जनताको ‘ट्रष्टी’मात्र हुनसक्छ । यो जनतासँगको विश्वासको नातालाई सरकारले कायम राख्न सकेन भने यसको वैधानिक क्षमता यथावत् रहिरहन सक्दैन । त्यसैले नेपालसँगको सम्बन्धमा मुनासिव हुनुपर्ने बाध्यता भारत सरकारलाई पनि छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भारत उड्ने हतारो बुझ्न सकिएको छैन ।
भारतीय जनता नेपाली विरोधी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । त्यसोभए किन भारतले नेपाललाई खाइदिन्छ, सिध्याइदिन्छ भनिँदैछ ? कसरी खाइदिन्छ, नेपाललाई ? नेपाल दाल–भात हो र ? भारतसँग नेपाल निल्न सक्ने घाँटी छ र ? अमेरिकाजस्तो बलियो मुलुकले सिरिया र लिबिया खानसकेको छैन । रूसजस्तो शक्तिशाली मुलुकले क्राइमिया खान सकेन । खाइसकेको त्यत्रो पूर्वी युरोप सबै ओकल्नुपर्‍यो । क्षमताभन्दा बढी खान खोज्दा यस शताब्दीको हरेक साम्राज्यवादीलाई पखाला लागेको छ । नेपालको समस्यालाई चाहिनेभन्दा ठूलो देखाउनु हुँदैन । मूल कुरा नेपालका नेताहरूले नेपालीको भाका बोल्न सक्नुपर्छ । भारत सरकारबाट भएका निरन्तर अन्यायहरू स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ । नेपालीको भाका भनेको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, समानता र सहअस्तित्वको भाका हो । यो भाका विवेक र शास्त्रसम्मत भाका भएकाले यसको स्पष्ट प्रयोगबाट कसैले डर मान्नु पर्दैन । नेपालका नेताहरूले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि पटक–पटक यो भाकाको सौदाबाजी गरेकाले उनीहरूको स्वाभिमान घटेको हो । देशको साख गिरेको हो । देशले दु:ख पाएको हो । संसारमा यस्तो कुनै तागत छैन, जसले यो भाकालाई दबाउन सकोस् । नेपाल सरकारले देखेको र बुझेको हुनुपर्छ, नाकाबन्दी लगाएर निमिट्यान्न पार्न खोजे पनि कुनै मुलुकले पनि कसैलाई घाँटी थिचेर मार्न सक्दैन । आफ्नो कुरा भारत गई राख्न नसक्ने नेताबाट देशले धेरै क्षति व्यहोरिसकेको छ । त्यसैले नेपालका जुन आधारभूत चरित्र छ, त्यो चरित्रको अभिव्यक्ति भारत नगई नेपालबाटै पनि हुनसक्छ ।
एकछिनलाई मानौं प्रधानमन्त्रीमा असल र आत्मसम्मानयुक्त नेपाल–भारत सम्बन्ध सिर्जना गर्ने अठोट छ । यसको पहल उहाँ आफैं गर्न चाहनुहुन्छ । राम्रो कुरा हो । नेपालमा भइरहेको परिवर्तन भारतीय एजेन्डामा भएको हो भन्ने कुरा भारतले प्रस्ट रूपमा देखाइदिएको छ । संविधान घोषणा भएपछि मुख छाडेर सार्वभौम नेपालविरुद्ध गरिएका अभिव्यक्तिहरू त्यहाँको विदेश मन्त्रालयमार्फत नै आएका हुन् । किन यत्तिका वर्षदेखि आमनेपालीको चाहना हुँदाहुँदै पनि नेपाल–भारत सीमा संरक्षण गरिएन ? आजका नेपालीले बुझिसकेका छन् ।किन आउनेजाने मान्छेको अध्यागमन व्यवस्थापन हटाइएको रहेछ ? भारतीयलाई वर्क परमिटको व्यवस्था गर्दा नेपालमा किन आन्दोलन गराइएको रहेछ ? किन पटक–पटक नागरिकता वितरण गरिँदो रहेछ ?
नेपालको जन्मदर बढी भएर मात्रै नेपालको जनसंख्या बढेको रहेछ त ? क्रान्ति गराई पटक–पटक नागरिकता वितरण गराएर अब कित्ता कायम र सीमांकनको कुरा गरिँदैछ । जनसंख्यालाई आधार बनाई निर्वाचन प्रणालीको कुरा गरिँदैछ । यी कुरा किन भारतबाट आइरहेका छन् ? भारतकै विविध क्षेत्रका सम्बन्धमा यी कुरा किन उठेका छैनन् ? यसबाट स्पष्ट हुन्छ, किन नेपालमा भारतीयलाई दिएजस्तै सुविधा दिई संविधान कानुन परिवर्तन गराई डोर खटाई असोज ३ गतेभन्दा अगाडि भारतमै दशकौंदेखि जन्मे–हुर्के–बसेका नेपालीहरूलाई घर–घरमा भारतीय नागरिकता वितरण गरिँदैन ? के प्रधानमन्त्रीले नेपालीले बुझ्ने भाकामा यो कुरा भारतमा बोल्न सक्नुहुन्छ ?
भारतसँग समानताका आधारमा सहज सम्बन्ध नेपालको निरन्तर हितमा छ । यसका लागि आजसम्म मूल प्रति नभेटिएको सन् १९५० को कथित सन्धि खारेज गर्नुपर्छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय हस्तक्षेप अन्त्य हुनुपर्छ । दोहोरो आवागमनलाई संकुचित नगरी नेपाल–भारत खुला सीमा बन्द गरिनुपर्छ । नेपालको आन्तरिक व्यवस्थापन नेपालीको समस्या हो । नेपालका खस जाति, जनजाति तथा मधेसीबीच मनोमालिन्य रोपेर तथा मधेसीहरूलाई भारतसँग गाँजेर नेपाललाई दुश्चक्रमा राख्ने परम्परा छोडिनुपर्छ । नेपालको जनसांख्यिक विशेषता नेपालको स्थायित्वको आधार हो । नेपालीहरू आफ्नो देशमा अल्पसंख्यक हुन चाहँदैनन् भन्ने कुरा नेपालले भारतीय जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ । के प्रधानमन्त्रीसँग त्यो अठोट छ ?
हिमाल, पहाड र तराईबाट बनेको नेपाली पहिचान अमिट र अकाट्य पनि छ । यो केवल नेपालका राजाहरूले घोषणा गरेर वा संविधानमा लेखेर कायम भएको होइन । नेपाल एकीकरणकै प्रयास भइरहँदाको अवस्थामा भएको १७६३ तिरको मिर कासिमसँगको युद्धलाई सम्झँदा हुन्छ । त्यसको चार वर्षपछि नेपालले कसरी किनलकको आक्रमणलाई परास्त गर्‍यो ? भोटसँगको १७८८ को युद्ध कति विभत्स थियो ? १७९२ मा भएको अर्को नेपाल–भोट युद्धमा कसरी नेपालले आफ्नो सीमा सुरक्षा गर्‍यो ? तेस्रो नेपाल—भोट युद्धको भयानकताबारे पनि एकपटक विचार गर्दा ठिकै होला । नेपालको सीमा र सुरक्षाका लागि नै सिपाही विद्रोह दबाउन नेपालीले भूमिका निर्वाह गरेको प्रधानमन्त्रीलाई अवगत हुनुपर्छ । नेपाली साझा पहिचान त्यसै उत्पत्ति भएको होइन ।
त्यसैगरी नेपाल–अंग्रेज युद्धले स्थापना गरेको नेपाली परिचय प्रधानमन्त्रीले गाइनेको गीतमा पनि सुन्नुभएको होला । यसमा हरेक नेपाली परिवारले आर्थिक रूपमा वा श्रमदान गरी वा योद्धा पठाई देश बचाएका थिए । इतिहासमा जितगढको युद्ध वा मकवानपुर, हरिहरपुर गढी, नालापानी वा जैथकको युद्धमा नेपालीले गरेको बलिदान कम्तीमा नेपालीलाई सम्झाइराख्नु पर्दैन । नालावन र जैथकको दोस्रो युद्धलाई पनि सम्झन सकिन्छ । पहिलो विश्वयुद्धमा बजिरस्तानदेखि अफगानिस्तानसम्म नेपालीले आफ्नो बलिदान गर्दा पहाडको कुनाकन्दरामा रहेको यही सानो देश बचाउने निहित उद्देश्य थिएन र ? दुवै विश्वयुद्धमा नेपाली जातिले विदेशमा रगत दिएरै आफ्नो देशका लागि सुरक्षा लिएका होइनन् र ? कुन जाति, कुन भेष, कुन धर्म, कुन संस्कृति, कुन परम्पराले आफूलाई उत्सर्ग गरेको थियो, के ती स्वत: स्पष्ट छैनन् ? नेपाल बनाउँदा कोको ढलेका थिए । बिर्साएर बिर्सन सकिन्छ ?
भारतीय जनता समग्रमा नेपाली जनताको अहितमा जानुपर्ने कारण छैन । सत्ता स्वार्थका लागि नेपाल लुट्नुपर्छ वा नेपाली नेतालाई लेनदेन गरी वा चेपुवामा पारी नेपालबाट फाइदा लिनुपर्छ भन्ने सोच्दैनन् । असल तथा दिगो नेपाल–भारत सम्बन्ध आडभरोसा यही हो । नेपालीहरू आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति र आदि प्रचलनहरू कायम रहोस् भन्ने चाहन्छन् । रगतले सिंचेको पहिचान हो । भाषा, धर्म, संस्कृतिभन्दा धेरै माथि गएर नेपालीले आफ्नो मुलुकको पहिचान स्थापित गरेका हुन् । यसलाई गलाउनेगरी नेपालका बारेमा सोच्नु कसैको
हितमा हुनसक्दैन ।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा भारतीयहरू ‘विशेष सम्बन्ध’को कुरा गर्छन् । ठूलो र सानो देशका बीचमा यस्तो सम्बन्ध शंकाको दायरामा आउँछ । नेपालीलाई मन पर्दैन यस्तो विशेष सम्बन्ध । संसारका धेरैजसो विभत्स लडाइँहरू एउटै भाषा, एउटै धर्म, एउटै क्षेत्रका बीच भएका थिए । रामायणदेखि महाभारतसम्म तथा रोमनदेखि ग्रीक तथा इजिप्सियनसम्म आफन्त बीचकै तेरो–मेरोले ठूलठूला लडाइँ लडिएका हुन् । सम्राट अशोकले आफ्नो साम्राज्य कायम गर्दा गरेको विभत्स र अन्यायपूर्ण युद्धबाटै द्रवित भई पछि उनी बुद्धमार्गी बन्न पुगेको इतिहासमा पढिएकै कुरा हो ।
अट्टोमान साम्राज्य लगायतको विखण्डनको इतिहास पनि आफन्त बीचकै तेरो–मेरोबाट झांगिएको थियो । करोडौंको जीउज्यानको खति भएको दोस्रो विश्वयुद्धको केन्द्र मूलत: युरोप नै बन्यो । युरोपियन बीचको धर्म, संस्कृति र रगतको सम्बन्धले विश्वयुद्धलाई छेक्न सकेन । मानवताको विकास वा सम्पूर्ण मानवीय पक्षहरूको सम्बद्र्धन यदि संसारमा भएको छ भने त्यो केवल समानता, सहअस्तित्व र समन्यायको अवधारणाबाटै भएको हो । नेपालीको समग्र सुरक्षा यो बाटोबाट मात्र सम्भव छ ।
नेपाली समाजलाई चिराचिरा पारेर कसैको हित हुनसक्दैन । तराई मधेसको समस्याको निदान नेपालीले नै खोज्ने हो । नेपाली भएर नै यसको समाधान खोज्नुपर्छ । नेपालीका लागि नेपाली भूमि सुरक्षित रहनुपर्छ । चाहे नेपाली जनजाति हुन् वा खस समुदाय वा रैथाने तराईबासीहरू उनीहरूको ‘रोटी’ पनि नेपालमै छ, ‘बेटी’ पनि नेपालमै छ । धर्म पनि यहीं छ, संस्कृति पनि यहीं छ । उनीहरूको स्थिरतालाई चुनौती दिने अनि भारतका लागि सदाशयता खोज्ने दुइटै कुरा सँगसँगै जान सक्दैन । दुई—चारजना नेपाली नेतृत्वलाई तमसुक गराएको भरमा नेपाल नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ भन्ने मान्यता ह्रासोन्मुख कूटनीतिमात्र हो ।
परिवर्तित संसारमा नेपालजस्तो साना मुलुकहरूका लागि ठूला मुलुकले सोच्न नसक्ने धेरै विकल्पहरू छन् । तथापि छिमेकीहरूमाझ सबैभन्दा राम्रो विकल्प अहस्तक्षेप, सहअस्तित्व र सामूहिक विकासको आधारमै तय हुनुपर्छ । अहिलेसम्मको नेपाल–भारत सम्बन्ध भनेको नेपाललाई भारतका लागि पुनर्संरचना गर्ने भन्ने मान्यतामा आधारित छन् । यही मान्यतामा नेपालसँगको बन्द–व्यापार, दुईपक्षीय लगानी वा विद्युत, पानी, नहर–सिंचाइ, सडकजस्ता क्षेत्रमा काम गरिएका छन् । नेपालीहरूको कुण्ठाको कारण यही हो । अब पुन: त्यो हुनसक्दैन र आशा गरौं, प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो हुन दिनुहुने छैन । उहाँसँग नाथन हेलको जस्तो ज्यान मागिएको होइन, आफ्नो सार्वभौम अधिकारमात्र मागिएको हो ।
प्रधान मन्त्रि के पी ओलीले संघीय समाजवादी फोरम नेपाल मात्र नभई अर्को तराई केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई पनि सरकारमा सहभागी गराई मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न लागेको देखिंदै छ । उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भोलि...Read All
"The juice offer to Resham Chaudhary, which mocks the spirit of rule of law, failed to draw the attention of the opposition party. Instead, cadres of the party themselves organizedaprotest demonstration demanding the release of their leader Ganesh Lama. Lama was arrested after he was found in possession of an illegal weapon." http://bipinadhikari.com.np/opposition-party-not-weighing-in/ ... See more
KATHMANDU, March 20: Inaparliamentary system, the main opposition party in parliament is supposed to act asawatchdog against any wrongdoings of the ruling
राजनीतिले रोपेको विष
संविधानविद् डा. अधिकारी भन्छन्, “न्यायपालिका सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै छन्, त्यसो गर्न समय लाग्छ, तर तत्काल गर्नुपर्ने काम भनेकै निष्पक्ष र क्षमतावान व्यक्ति मात्र न्यायालयमा पुग्ने सुनिश्चितता हो ।” http://himalkhabar.com/news/7089 ... See more
स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणालाई नै धरासायी पार्न खोजेको ‘पराजुली प्रकरण’ ले भागबण्डाको राजनीतिबाट झाङ्गिएको ..... ... See more
Bipin Adhikari said the two parties - UML, Maoists could not continue to avail the ‘benefit’ the constitution offered after their unification. https://thehimalayantimes.com/nepal/left-alliance-shouldnt-have-contested/ ... See more
With the left alliance candidate for the post of deputy speaker — CPN-UML leader Shiva Maya Tumbahamphe — almost certain to win the election given the alliance’s majority in the House of Representatives and CPN-Maoist Centre’s Krishna Bahadur Mahara already elected to the post of speaker, le... ... See more
Apex court’s senior-most Justice Deepak Raj Joshi set to take charge http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2018-03-15/judicial-council-relieves-cj-parajuli-of-his-duties.html ... See more
Inadramatic turn of events, the Judicial Council (JC) on Wednesday terminated Chief Justice Gopal Prasad Parajuli stating that investigation of documents showed he had attained the retirement age (65) seven months ago on August 5, 2017. ... See more